Gloria Fuertes: gabayo | Suugaanta Wararka
Encarni Arcoya | 30/12/2021 09:12 | La cusbooneysiiyay 30/12/2021 09:14 | Gabay
Isha sawirka Gloria Fuertes: Gabayo - Facebook Gloria Fuertes
Shaki kuma jiro in Gloria Fuertes ay tahay mid ka mid ah qorayaasha ugu caansan adduunka. Maansadiisa inta badan waa la xusuustaa sababtoo ah waannu ku soo wada kornay. Laakiin runtu waxay tahay in ay ka badan tahay gabyaa caruur ah. Shayga xoogga leh ee Gloria iyo gabaygeeda labaduba way sii jiraan muddo ka dib.
Laakiin, Kumay ahayd Gloria Fuertes? Gabaydee ayaa ugu muhiimsan ee aad tirisay? Sida ay ahayd?
1 Waa tuma Gloria Fuertes
1.1 Taariikh nololeedka
2 Gabayadii ugu fiicnaa ee Gloria Fuertes
2.1 Markay ku magacawdaan
2.2 Waxaad aragtaa waxa aan macno lahayn
2.4 Diiqu Kac
2.6 Bal qiyaas, qiyaas...
2.8 xageed u socotaa nijaar? (CAROL)
2.10 Labada isqaba
2.11 Geela yar
2.12 Wejigayga wareegsan
2.13 Dameer miskiin!
Waa tuma Gloria Fuertes
Erayadii Camilo José Cela, Gloria Fuertes waxay ahayd 'malaa'ig qaniinyo ah' (Iga raali ahow). Ma aysan helin nolol sahlan, sidaas oo ay tahayna, waxay ku guuleysatay inay curiso qaar ka mid ah gabayada ugu quruxda badan ee carruurta.
ammaan xoog leh waxa uu ku dhashay Madrid 1917kii. Waxay ku kortay xaafadda Lavapiés, laabta qoys is-hoosaysiiya (hooyada tolley iyo aabbaha albaabka). yaraantiisii ​​waxa uu dhex maray dugsiyo kala duwan, kuwaas oo uu qaarkood maansooyinkiisa ku tiriyay.
Markii ay da'deedu ahayd 14 jir, hooyadeed waxay ku diiwaan geliyeen Machadka Waxbarashada Xirfadlayaasha Haweenka, halkaas oo ay ka qaadatay laba shahaado: Shorthand iyo Typing; iyo tan Nadaafadda iyo Daryeelka Carruurta. Halkii uu shaqo u tegi lahaa, waxa uu go’aansaday in uu isku diwaangeliyo Naxwaha iyo Suugaanta.
Hadafkaaga, iyo waxa ay waligeed rabtay inay noqoto, waxay ahayd qoraa. Wuxuuna ku guulaystay 1932, isagoo 14 jir ah, markii ay daabaceen mid ka mid ah maansooyinkiisii ​​ugu horreeyay, "Carruurnimo, Dhallinyaro, Waayeel...".
Shaqadiisii ​​ugu horraysay waxay ahayd xisaabiyenimo warshadeed, taas oo siisay waqti uu gabayo u qoro. Waxay ahayd 1935-kii markii uu daabacay ururin iyaga ka mid ah. Jasiirad la iska indha tiray, wuxuuna bilaabay inuu gabayo tixgalin ah ka jeediyo Radio Madrid. Si kastaba ha ahaatee, ma uusan ka tegin shaqadiisa. Laga soo bilaabo 1938 ilaa 1958 waxay ka shaqaynaysay xoghaye ilaa ay awooday inay shaqada ka tagto. Waxayna tahay in shaqadaas ka sokow ay iyaduna tifaftire kale ku lahayd joornaalka carruurta. Noocaas oo ahaa kii u suurtagashay in uu furo albaabada caannimada, kaas oo u yimid 1970-kii markii Telefishanka Isbaanishka ayaa ku soo bandhigay iyada barnaamijyadeeda carruurta iyo dhalinyarada oo uu maansadiisa ka dhigay caalamka oo dhan.
Ugu dambayntii oo ay ka mid tahay maansooyinka ay iyada lafteedu kaga hadlayso nolosheeda, waxaanu idiinka tegaynaa sida ay isu soo bandhigtay.
Gloria Fuertes waxay ku dhalatay Madrid
laba maalmood ka dib,
Hagaag, hooyaday umusha waxay ahayd mid dhib badan
in haddii la dayaco ay u dhimato in ay ii noolaato.
Markii uu saddex jir ahaa wuxuu hore u yaqaannay sida wax loo akhriyo
Horeba waxaan u aqaanay shaqadayda lix.
Waxaan ahaa mid wanaagsan oo dhuuban
sare oo xoogaa jirran.
Aniga oo sagaal jir ah ayaa baabuur igu qabsaday
Afar iyo tobankii ayaa dagaalku i qabsaday;
Shan iyo tobankii hooyaday way dhimatay, way tagtay markii aan u baahnaa.
Waxaan bartay bakhaarrada ku dhex-jiro
iyo in ay magaalooyinka u tagaan dabacasaha.
Markaas waxaan ku bilaabay jacayl,
-Ma odhanayo magacyo-,
Mahadsanid taas, waan awooday inaan la qabsado
Waxaan rabay inaan dagaal galo, si aan u joojiyo,
Laakin meel dhexe ayay i joojiyeen
Dabadeed xafiis baa ii soo baxay.
meesha aan u shaqeeyo sidii doqon aan ahay,
"Laakin Ilaahay iyo gogosha way ogyihiin inaanan ahayn."
Habeenkii ayaan wax qoraa
garoonkana aad ayaan u tagaa.
Dhammaan taydu way dhimatay sanado
aniguna keligay baan ahay.
Aayado ayaan ku dhejiyay dhammaan jadwaladaha,
Waxaan ku qoraa wargeyska carruurta,
oo waxaan rabaa inaan iibsado ubax dabiici ah qaybo
sida kuwa ay Pemán siiyaan mararka qaarkood.
Gabayadii ugu fiicnaa ee Gloria Fuertes
Xigasho: Facebook Gloria Fuertes
Hoos waxaan ku soo uruurinay qaar ka mid ah gabayadii Gloria Fuertes si, haddii aadan aqoon iyaga, waxaad arki kartaa sida uu u qoray. Oo, haddii aad iyaga taqaan, markaa hubaal inaad rabto inaad mar kale akhrido sababtoo ah waxay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan gabayada.
Markay ku magacawdaan
Marka ay ku magacawdaan
Magacaaga in yar bay iga xadeen;
waxay u egtahay been,
in nus darsin xaraf ay wax badan sheegaan.
Waallidaydu waxay ahaan lahayd inaan derbiyada magacaaga ku dumiyo.
Waxaan aadi lahaa rinjiyeynta derbiyada oo dhan,
ceel ma jiri lahayn
aniga oo aan muujin
inaan magacaaga sheego,
mana buur dhagax
meeshaan ku qaylin maayo
lixda xaraf eega
Waalidaydu waxay ahaan lahayd,
Shimbiraha bar si ay u heesaan.
Bar kalluunka inuu cabbo,
ragga bar in aan waxba jirin,
sida inaad waalanto oo magacaaga ku celceliyo.
Waalidaydu waxay ahaan lahayd inaan wax walba iloobo,
22 xaraf ee soo hadhay, ee tirooyinka,
ee buugaagta la akhriyey, ee aayadaha la abuuray. Magacaaga ku salaam.
Weydiiso rooti magacaagu ku qoran yahay.
- Had iyo jeer wax la mid ah ayuu sheegaa - waxay ku odhan lahaayeen tallaabadayda, aniguna, aad u han weyn, aad u faraxsan, aad u faraxsan.
Aduunyada kale ayaan aadi doonaa adiga oo magacaaga afkayga ku haya.
su'aalaha oo dhan waan ka jawaabi doonaa magacaaga
- Garsoorayaasha iyo Awliyada waxba ma fahmi doonaan.
Ilaah wuxuu igu xukumi lahaa inaan dhaho aan joogsanayn weligeed.
Waxaad aragtaa waxa aan macno lahayn
Waxaad aragtaa wax aan macno lahayn,
Waxaan jeclahay in aan qoro magacaaga
warqado ku buuxi magacaaga,
hawada ka buuxi magacaaga;
u sheeg carruurta magacaaga,
u qor aabahay oo dhintay
una sheeg in magacaagu sidaas yahay.
Waxaan aaminsanahay in mar kasta oo aan sheego, aad i maqasho.
Waxaan filayaa inay nasiib wacan tahay.
Aniga oo faraxsan ayaan waddooyinka maraa
oo magacaaga mooyee wax kale ma sido.
Waxaan ku dhashay da' aad u yar.
Waxaan joojiyay akhris la'aanta anigoo saddex jir ah,
bikrad, siddeed iyo toban jir,
shahiid, konton jir.
Waxaan bartay baaskiil wadida,
markii ay i soo gaadhi waayeen
in la dhunkado, markii ay i soo gaadhi waayeen
naasaha ilaa afka.
Isla markiiba waxaan gaadhay qaan-gaadhnimo.
kan ugu horreeya ee magaalada,
Taariikhda Xurmada leh iyo Baaqa.]
Algebra iyo Walaasha Maripili midna iguma habboona.
Way iga eryeen.
Waxaan dhashay peseta la'aan. Hadda,
Konton sano oo uu shaqaynayey ka dib.
Waxaan haystaa laba.
diiqii baa yidhi
madax cas buu ahaa,
oo waxay ahayd suudhkiisii
oo ka mid ah plumage qurux badan.
in qorraxdu mar hore jirto
farxad la toosow,
maalintu way soo socotaa.
la kac oole,
waxaan kugu sugayaa "dugsiga".
Magaaladu uma baahna saacad
diiqu waa u qalantaa qaylo-dhaanta.
Cawska dusheeda ayay geeduhu igula hadlaan
ee gabayga rabaaniga ah ee aamusnaanta.
Habeenkii ayaa iga yaabiya dhoola cadeyn la'aan,
oo naftayda ku kicinaysa xusuusta.
sugitaanka! ha tagin!
Yaase dhinac u ah? Yaa yiri?
Dhunkasho aan sugay, waad iga tagtay
Baalka dahabka ah ee timahayga
Ha tagin! Iftiimi ubaxyadayda!
Oo anigu waan ogahay, adiga, saaxiib dabayluhu, malaa'igtii;
u jawaab oo waxaad ku tidhaahdaa waad i aragtay.
oo leh buugga caadiga ah ee farahaaga dhexdooda.
Markaad baxdo, iftiimi xiddigaha,
Waxay qaateen iftiinka, oo anigu aad baan u arkaa.
oo waan ogahay, dabayl, inay naftayda bukoon tahay;
oo u qaado "taariikhdan" isaga oo si degdeg ah u duulaya.
... Dabayshuna si macaan ayay ii salaaxdaa.
oo ka taga dareen la'aan rabitaankeyga ...
Xigasho: Gloria Fuertes Facebook
Bal qiyaas, qiyaas...
dameer buu fuulaa
waa gaaban yahay, buuran yahay, calooshana wuu leeyahay.
gaashaanka iyo waranka,
odhaahyada yaqaan, waa caqli badan yahay.
Waa kuma? (Sancho Panza)
Inaad dhulka joogto Aabbow,
In aan kugu dareemo birta geedka,
Jirka buluugga ah ee shaqaalaha,
In inantii maroorsanaysay
Dhabarka, isku dhafka dunta farta.
Aabbahayaga dhulka jooga,
Halkaad ku leedahay sharaftaada iyo cadaabtaada
Iyo dhumucdaada; in aad maqaaxiyaha ku jirto
Halka maalqabeenadu ay sharaabkooda ku cabbaan.
Kursiga oo ku yaal akhriska Prado.
Waxaad tahay odaygaas shimbiraha socodka ku siiya jajabka rootiga.
In cicada, in dhunkashada,
Dusha sare, laabta
Kuwa wanaagsan oo dhan.
Aabbe meel kasta ku nool
Eebbow godkuu doono ha galo.
Kaaga cidhiidhiga ka qaada, oo dhulka jooga.
Aabbahayo waannu ku aragnaa
Kuwa ay tahay inaan dib u aragno,
Meel kasta, ama meel kasta oo cirka ah.
xageed u socotaa nijaar? (CAROL)
-Xagee u socotaa nijaar
oo leh baraf da'ay?
- Buuraha xabo ayaan u tagaa
- Buurahaan xabo u tagaa.
Aabbahay waa sugayaa.
-Xaggee u socotaa jacaylkaaga
-Waan badbaadin doonaa qof walba
kuwa aan i jeclayn.
-Waxaan aadayaa dagaal
si loo joojiyo.
Waxaan helay afartan kiilo.
Waxaan qarka u saarnaa tiibishada
oo ku yaal cidhifka xabsiga.
qarka u saaran saaxiibtinimada,
qarka u saaran inuu is dilo,
qarka u saaran naxariista.
qarka u saaran xaasidnimada.
qarka u saaran caannimada,
iyo, in yar, waxay iga dhigtay hurdo.
oo halkan waxaan ku seexanayaa cidhifka.
qarka u saaran inuu soo tooso.
Shinni kasta iyo rafiiqeeda.
Shimbir walba calaacashadeeda.
Mid walba mawduuciisa.
Mug kasta oo leh daboolkiisa.
Nin walba oo noociisa leh.
Mid waliba biibiile buu ku foodhayaa.
Mid kastaa wuxuu diiradda saarayaa shaabadiisa.
Saxan walba koobkiisa.
Webi kasta iyo geestiisa.
Bisad walba bisaddeeda.
Roob kasta oo daruurtiisa wata.
Daruur walba biyaheeda.
Wiil walba gabadhiisa.
Cananaas kasta oo cananaaska leh.
Habeen kasta oo waagu baryo.
Awrkii waa la muday
iyo makaanikada Melchor
ka baxsan geedka shanaad...
Melkiyoor weyna wuu welwelay
wuxuu la tashaday "Longus"kiisii.
-Ma aan iman,
iyo Dhalmada Quduuska ah ayaa timid!
-waxa ay saddex daqiiqo dhaaftay laba iyo toban
Saddex boqorna waa la waayey.
badh ka badan ayaa dhintay intii nool
oo ku dhex jira jirrid geedo saytuun ah.
Ku dhow Gaspar,
Melchior ayaa dhegta ugu sheegay:
-Biriyaa geel wanaagsan
in bari ay kaa iibiyeen.
Halka laga galo Beytlaxam
awrkii baa ku dhacay.
Alla maxaa murugo badan
belfo iyo noociisa!
Malmalku wuu soo dhacayay
Baltasar waxay sitaa laabta,
Melchior ayaa riixayay cayayaanka.
Oo waagii horeba
-Shimbiruhu waa hore u heesi jireen-
saddexdii boqor way iska joogeen
afka furan oo aan go'aan lahayn,
maqal hadalka sida nin
ilmo dhawaan dhashay.
-Ma rabo dahab iyo foox
ama hantidaas aad u qabow,
Geela waan jeclahay, waan jeclahay.
Waan jeclahay isaga, - Ilmihii ayaa ku celiyay.
Sadexdii boqor lug bay ku soo noqdeen
rafaad iyo dhibban.
Inta awrkii jiifay
canugga ku xajiyo.
Waxaan leeyahay indho iyo san
iyo waliba af yar
in la hadlo oo la qoslo.
Indhaha ayaan wax walba ku arkaa
sanka ayaan ku sameeyaa achis,
afkayga sida sidee
Dameerku weligii ma joojin doono inuu dameer yahay.
Sababtoo ah dameerku waligiis iskuul ma aado.
Dameerku weligii faras ma noqon doono.
Dameerku waligiis kuma guulaysan doono tartanka.
Waa maxay dameerku inuu dameer yahay?
Magaalada dameerku iskuul kuma laha.
Dameerku wuxuu cimrigiisa ku dhammeeyaa shaqo.
xanuun iyo ammaan la'aan,
Iyo maalmaha fasaxa ah
oo ku xidhan giraanta ferris.
Dameerku wax ma akhriyi karo,
laakiin xasuus bay leedahay.
Dameerkii wuxuu gaadhay xariiqii ugu danbeeyay,
Laakin abwaanadu isagay u heesaan!
Dameerku wuxuu seexdaa aqal shiraac ah.
Dameerka ha ku odhanina dameer.
u yeedha "kaaliyaha ninka"
ama u yeedh isaga qof
Ma taqaan gabayo badan oo mudan in la xasuusto Gloria Fuertes?
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Noocyada » Gabay » Gloria Fuertes: gabayo